Adịla squared bụ ikpo okwu nwere egwuregwu dị iche | Androidsis
Detuo uzo maka ihe odide na-akpali akpali nke echegbula
Anyị abụwo ọnwa ole na ole nke egwuregwu vidiyo dị iche iche na-apụta nke anyị kwesịrị ime dọpụta ụzọ gaa n'ihu nke mere na protagonist ghara ịda n'ihu ọdọ mmiri lava ma ọ bụ mara ka ọ ga-esi ruo ebe ndị ahụ na-adịkarị anya mgbe ụfọdụ. Ụdị ikpo okwu nke na-egosi egwuregwu ọzọ dị iche na nke anyị na-eji na ngalaba a nke anyị nwere ezigbo ọla na-egbuke egbuke. dị ka CATTCH, Egwuregwu vidiyo mara mma nke ihe nkiri, agba na imewe nke mkpụrụedemede na ọkwa fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke zuru oke maka ngwaike anyị nwere ugbu a na gam akporo.
Ugbu a, anyị nwere Adịla Squared dị ka ikpo okwu nke anyị ga-enyere a agwa dị iche iche na-adọrọ mmasị na ndị bịara abịa imeri ihe mgbochi ndị ahụ site na ịbịaru ụzọ n'ihu. Egwuregwu ndị na-agba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ nke anyị na-agaghị enwe obere oge iji see ahịrị ndị ahụ na-eme ka ndị odide ahụ nwee ike ịwụ elu, nweta mkpụrụ ego ma ọ bụ malite onwe ha site na ígwè ọrụ dị iche iche, dị ka egbe ala. Egwuregwu vidio nke nwere ike ịghọ ihe mgbagwoju anya na mbụ ruo mgbe mmadụ na-ejide usoro egwuregwu ahụ, ma ozugbo emeri ya, onye ahụ na-ahapụ onwe ya ka ọ nwee mmasị ịchọta ụwa nke ya nke ọma nwere ụda olu na agba.
1 Ebe mara mma
2 Ụdị dike niile
Egwuregwu SuperHippo bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe a Don't Bee Squared na Pirate Legends TD wetara ya n'oge na-adịbeghị anya. Egwuregwu vidiyo na-amasị ya gburugburu na nzụlite ndị ahụ nke na-ejupụta ihuenyo ahụ na agba dị egwu, na egwuregwu ahụ nke anyị ga-esetịpụ ígwé ojii ka onye isi na-adịghị akwụsị ịgba ọsọ nwee ike imeri ihe mgbochi ndị ahụ niile. Ụzọ na-atọ ụtọ iji webata onye ọkpụkpọ egwuregwu vidiyo a na-enweghị na Play Store.
Akụkọ ahụ na-etinye anyị n'ihu onye ọkà mmụta sayensị ara bụ na-atụgharị ihe niile n'ime cubes, yabụ anyị ga-egbochi ya ime ka anyị ghọọ cube ọzọ. Ngwaa dị ka ịwụ elu, ibia, ịtụba, ịdọrọ na kụrie ga-abụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ị ga-eji gosipụta ọtụtụ igwe dị iche iche na nke na-enye ọkwa dị elu na nhazi niile. Ya mere Egwuregwu SuperHippo na-enye nnukwu ihe ọchị na ngwa ngwa ngwa ngwa site na mgbe egwuregwu malitere.
Ụdị dike niile
Otu n'ime njirimara ya kachasị mma bụ ndị dike nwere ike iji nwee penguin, ọbọgwụ ninja ma ọ bụ hedgehog nke ga-enyere anyị aka ịnye ụdị mmegharị na ihe ngosi ndị ọzọ. Egwuregwu vidiyo nke ikpo okwu, ihe mgbochi dị ize ndụ na ụdị ndị iro niile ga-abụ ihe ịma aka kasịnụ. Ị nwekwara gburugburu anọ: oke ọhịa, ájá nke Tropic, ugwu mgbawa na ụlọ nsọ. Anyị enweghị ike ichefu ihe odide ndị ọzọ nke abụọ ga-eme ka ihe omume ahụ echere anyị n'aha a.
Egwuregwu vidiyo nke nwere ụdị agwa na ndị iro dị iche iche nke anyị na-agaghị adị mfe mgbe anyị chọpụtara ha. Site na oke na-efe efe, ọkà mmụta sayensị ara ma ọ bụ shark na ọtụtụ ndị ọzọ, Don't be Squared tụrụ aro egwuregwu dị iche na ụdị ọdịnaya dị iche iche nke anyị agaghị akwụsị igwu egwu. Naanị ihe bụ na egwuregwu ahụ nke ịbịaru ụzọ na-ejikọta gị ka ị nọgide na-egwu ya.
Got nwetara ya n'efu site na Playlọ Ahịa Google na micropayments ndị doro anya.
Nhazi nke gburugburu ebe obibi, agwa na ndị iro ha na-arụ nnukwu ọrụ n'ihi na ihe niile kechie bụ Emela Squared. The animations na ọsọ nke egwuregwu na-ekwe ka na-agbakwụnye ọzọ àgwà na dum na naanị handicap bụ na ọ chọrọ ezigbo ngwaike nke mere na ọ dịghị akwụsịlata, ebe ọ bụ na ọbụna na ezi ngwaike ọ mgbe ụfọdụ jerks, ọ dịkarịa ala na mbụ egwuregwu .
Nke mara mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Detuo uzo maka ihe odide na-akpali akpali nke echegbula
Soro Caterpillar Bob na ihe ọchị na ihe omume jupụtara na Caterzillar